Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caafimaadka Warka » Isbitaalka Thailand wuxuu daahfuraa noocyo badan oo cusub oo Delta ah
Caafimaadka Warka • News • Thailand War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Wararka kala duwan
Noocyo cusub oo Delta ah oo laga helay isbitaalka Thailand - Lahaanshaha sawirka Pattaya Mail
Isbitaalka Ramathibodi ee Thailand wuxuu helay 4 nooc oo cusub oo kala duwan oo ah nooca Delta ee coronavirus-ka cusub ee shaybaarka lagu falanqeeyay isbitaalka.
Illaa iyo hadda, khubaradu waxay aqoonsadeen in ka badan 60 isbeddel oo suurtogal ah oo ku jira samaynta hidde-wade Delta.
Kuwaas, 22 ayaa la og yahay inay mas'uul ka yihiin soo bixitaanka noocyo-hoosaadyo cusub.
Kala duwanaanshaha Delta wuxuu ku dhawaad ​​60 boqolkiiba ka faafi karaa fayraskii SARS-CoV-2 ee asalka ahaa wuxuuna ka badbaadi karaa ka-hortagga infekshanka hore qiyaastii nus waqtiga.
Madaxa Isbitaalka Ramathibodi ee Xarunta Genomics-ka Caafimaadka, Prof. Dr. Wasun Chatratita, ayaa sheegay in noocyada kala duwan lagu ogaaday muunado laga helay dhowr isbitaal oo ku baahsan Thailand.
Wuxuu sheegay in AY.4 (B.1.617.2.4) laga helay 3% muunado laga soo diray Pathum Thani, halka AY.6 (B.1.617.2.6) lagu ogaaday 1% shaybaarrada dhammaan dalka. Dhanka kale, noocyo kala duwan AY.10 (B.1.617.2.10) iyo AY.12 AY.12 (B.1.617.2.15) ayaa laga helay 1% muunado laga soo diray Bangkok.
Illaa iyo hadda, khubaradu waxay aqoonsadeen in ka badan 60 isbeddel oo suurtogal ah oo ku jira samaynta hidde-wade Delta. Kuwaas, 22 ayaa la og yahay inay mas'uul ka yihiin soo bixitaanka noocyo-hoosaadyo cusub. Noocyadii ugu horreeyay ee Delta, oo la xaqiijiyay, AY.1 iyo AY.2, ayaa markii ugu horreysay laga helay Nepal.
Baarayaasha Jaamacadda Columbia University Mailman School of Public Health waxay isticmaaleen qaab kombuyuutar si ay u qiyaasaan in Kala duwanaanshaha Delta ayaa ku dhawaad ​​60 boqolkiiba faafa marka loo eego fayraska SARS-CoV-2 ee asalka ah wuxuuna ka badbaadi karaa xasaanadda caabuqa hore qiyaastii nus waqtiga. Marka la barbardhigo Delta, Beta iyo Gamma waa kuwo aan la gudbin karin laakiin awood u leh inay ka baxsadaan xasaanadda. Marka la barbardhigo fayraska asalka ah, Iota wuxuu aad ugu dhintaa dadka waaweyn.
Dr. Wan Yang, PhD, kaaliyaha borofisar-ka faafa iyo hormuudka daraasadaha ayaa yiri: “Kala duwanaanshaha cusub ee SARS-CoV-2 ayaa noqday mid baahsan, laakiin hadda tallaallada ayaa weli aad waxtar ugu leh ka-hortagga cudurrada daran ee caabuqyadan, markaa fadlan qaado tallaalay haddii aadan sidaas yeelin.
“Waxaa muhiim ah inaan si dhow ula soconno faafitaanka noocyadaan si aan u hagno tallaabooyinka ka -hortagga ee socda, ololaha tallaalka, iyo qiimeynta waxtarnimada tallaalka.
“Si aad u aasaasi ah, si loo xaddido soo bixitaanka noocyo kala duwan oo dhammaad leh Cudurka faafa ee COVID-19, waxaan u baahannahay dadaal caalami ah oo lagu tallaalayo dhammaan dadka adduunka oo dhan, oo aan sii wadno adeegsiga tallaabooyinka kale ee caafimaadka dadweynaha ilaa qayb ku filan oo dadka ah laga ilaaliyo tallaalka. ”